लकडाउन पालना नभए संक्रमण भयावह बन्नसक्ने चिकित्सकको चेतावनी
चैत्र १३, २०७६ | काठमाडौं
सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनलाई इमानदारीका साथ निभाउन नसके कोरोना भाइरसको संक्रमण भयावह हुन सक्ने चिकित्सकले चेतावनी दिएका छन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनले लकडाउनका बेला छर छिमेकमा जमघट नगर्न तथा सडकमा अनावश्यक हिड्डुल नगर्न सर्वसाधरणलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कोरोना भाईरसं सजिलै सर्ने भएकाले सामाजिक दुरी कायम गर्नु नै बच्नका लागि उत्तम उपाय रहेको डा. पुनको भनाई छ । रणनीतिक रुपमा लकडाउन प्रभावकारी योजना भएपनि कार्यान्वयन गर्न सर्वसाधारण आफै सचत हुनुपर्नेमा चिकित्सकले जोडदिएका छन् ।
लकडाउन गर्दा सामाजिक दुरी नै उत्तम विकल्प भन्दै मनोचिकित्शक डा. सगुन बल्लव पन्तले अत्यावश्यक परे मात्रै घर बाहिर निस्कन तथा अन्य ब्यक्तिसँग सम्पर्कमा नआउन आग्रह गर्नुभयो । यसैवीच कोरोना भाइरस संक्रमित २ जनाको काठमाडौंको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार जारी छ ।
उनीहरुको अवस्था स्थिर रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ । अहिले सम्म ६ सय ८७ जनामा कोरोनाको परिक्षण गरिएको छ । १३ जना कोभिड १९ को आंशकामा अस्पताल भर्ना छन् ।
गम्भीर स्वास प्रश्वासको समस्या रहेका ब्यक्तिलाई आइसोलेसनमा राख्ने गरिएको छ ।
नेता झाले भन्नुभयो, "सरकारलाई काउन्टर दिन संशोधन प्रस्ताव ल्याएका हैनौं"
गण्डकीमा थप १६ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ५४ पुग्यो
उपचार गरे बापतको रकम सरकारले नदिएपछि सेवा नै बन्द गर्ने अस्पतालको निर्णय
कोरोना संक्रमणबाट थप १ जनाको मृत्यु, संक्रमित २३०० पुगे